Ireo morontsiraka niboridana tsara indrindra any Danemark | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika miboridana any Danemark
Maria Jose Roldan | | Danemark
Nudism dia lasa fomba fahavaratra na fialan-tsasatra malaza ho an'ny olona maro. Na dia marina aza fa misy vondron'olona mampihatra ny fitanjahana amin'ny fiainany andavanandro, dia tranga kely kokoa izy ireo. Ny zavatra mahazatra dia ny fananan'ny olona fomba fiaina nentim-paharazana misy asa sy fifandraisana ara-tsosialy misy ny fitafiana sy ny fari-piainana ara-tsosialy fa rehefa tonga ny fialantsasatra dia te-hampiasa ny fitanjahana izy ireo.
Ny fitanjahana dia azo ampiharina amin'ny fahafinaretana fotsiny, hahitana izay tsapany na satria te-handatsaka ny fihenan-tsakafo isan'andro ianao mandritra ny taona ary te hiaina fahatsapana fahalalahana lehibe. Betsaka ny olona zatra miboridana satria amin'ity fomba ity dia tsapan'izy ireo fa misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny toetrany anaty sy ny natiora. Mahatonga azy ireo hahatsapa ho tsara sy mifandray amin'izao tontolo izao.
1 Danemarka sy ny morony
2 Manaja ny hafa
3 Tora-pasika nudist any Danemark
4 Aza mieritreritra be loatra momba izany
Danemarka sy ny morony
Ny morontsirak'i Danemark dia tsy latsaky ny 7300 kilometatra ny halavany Azonao alaina sary an-tsaina ny isan'ny torapasika marobe ao aminy mba hahafahan'ny tsirairay sy izay rehetra te hitsidika ity firenena ity hankafy tanteraka ny torapasika sy ny masoandrony. Misy amoron-dranomasina Danoa 200 mahery izay manana mari-pankasitrahana noho izy ireo morontsiraka tsara indrindra ary noho izany dia manana ny Sainam-pirenena Manga. Ity saina ity dia manome toky anao fa ny moron-dranomasina dia manana rano madio sy manjelanjelatra, madio izy io ary afaka mandany andro eny amoron-dranomasina ianao miaraka amin'ny fianakavianao sy ny namanao.
Raha mieritreritra ny handeha any Danemark amin'ny fialan-tsasatra ianao ary tsy milefitra amin'ny fitiavam-bolo, dia tsara kokoa ny manalavitra ny morontsirak'izy ireo na mitady toeran-kafa ahafahanao mankafy ny torapasika mifanaraka amin'ny soatoavinao. Fa maninona no lazaiko anao izany? Satria ny Danes dia tia miboridana ary tian'izy ireo hampihatra izany eny amorony.
Noho izany antony izany any Danemark dia misy morontsiraka nudiste maro, satria izany fomba izany no ahafahan'ny mponina monina ao manao asa tsy misy henatra ary tsy atahorana ho voasazy. Azonao atao aza ny mahita amoron-dranomasina eny amin'ny morony izay tsy mibiste ary mandeha miaraka amin'ny akanjo fitondra milomano ny olona fa misy ny safidy amin'ny fanesorana ny akanjo fitondra milomano ary manao nudism nefa tsy misy mitady hafahafa amin'izany.
Nudism any Danemark dia ekena tsara ary avela amin'ny ankamaroan'ny morontsiraka rehetra. Tsy hahay hampiasa ny fitoraham-bolo fotsiny ianao raha toa ka misy famantarana na fambara sasany izay mampitandrina anao fa eo amin'io toerana io dia voarara ny fanaovana nudism.
Manaja ny hafa
Ilaina ny mahatadidy fa ny fitovizan-tena dia tsy misy firaisana ara-nofo ary tsy zavatra maloto ataon'ny olona mahita ny hafa mitanjaka koa izany. Marina tokoa. Ny Nudism dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fandriampahalemana anaty, ny fahatsapana ny fahalalahana ary ny fifandraisana amin'izao tontolo izao.
Raha te-hanao nudism any amin'ny morontsirak'i Danemark ianao (na amin'ny toerana hafa na aiza na aiza misy ny fitadiavana), dia mila manaja olona hafa ianao. Zava-dehibe ny fanajana ny iray hafa no zava-dehibe indrindra ary tsy tokony haseho amin'ny hafa ny fihetsika mamoafady na tsy fanajana. Satria ireo karazana fitondran-tena ireo dia tsy avela, na aiza na aiza.
Tora-pasika nudist any Danemark
Ny morontsiraka miboridana any Danemark dia any atsimon'ny Marielyst Strand no betsaka, ny sasany amin'ireto morontsiraka ireto dia:
Boto Beach (amin'ny Nosy Flaster)
Morontsiraka Albuen (amin'ny nosy Lolland)
Beach amoron-trano (avaratry Hennestrans)
SPresstrand Beach (amin'ny Nosy Romo)
Skagen Beach sy Tannisbugten (avaratr'i Looken eo anelanelan'ny Nr. Lynby sy Rubjerg Knude na Hirtshals).
Raha ny tena izy, ny morontsirak'i Danemarka manontolo dia azo heverina ho morontsiraka lehibe miboridana, satria izay misy olona manana akanjo milomano dia azon'izy ireo atao ihany koa ny misafidy sy tsy mandeha miakanjo.. Azonao atao ny mahita an'io, ohatra, ao amin'ny fanamarihan'i Aarhus izay anaovan'ny olona fatratra ny fitiavam-bolo ary mandeha miboridana eny amoron-dranomasina. Raha ny marina, raha mankeny amin'ireto morontsiraka ireto ianao miaraka amin'ny akanjo fandroana dia hafahafa no hijeren'izy ireo anao, satria efa zatra mahatsapa ny fahalalahan'ny fitanjahana eny amoron-dranomasina izy ireo noho ny manao akanjo baoty handrakofana ireo faritra akaiky an'ny olona.
Aza mieritreritra be loatra momba izany
Raha te hampihatra ny fitanjahana sy maniry fialan-tsasatra manokana ianao dia aza mieritreritra be loatra momba izany ary mankafy ireo torapasika malalaka izay ho hitanao fa manana traikefa amin'ny fitanjahana. Ny faneken'ny fiaraha-monina misy azy ireo tanteraka dia tsy hisy olana amin'ny lalàna, ary tsy hanondro anao eny amoron'ny morontsiraka izy ireo satria hitranga any amin'ny firenen-kafa izay tsy eken'ny lalàna loatra ny nudism ary enjehin'ny lalàna aza.
Raha tsy heverinao fa ekena loatra izany dia tsy mila mitady sarintanin'i Danemark amin'ireo torapasika misy azy ianao ary ho hitanao ny fomba ilazany ireo morontsiraka fa misy nudists hahafahanao misafidy ilay iray akaiky indrindra ny toeram-ponenanao.
Ny lafiny tsara amin'ny morontsiraka miboridana any Danemark dia ny morontsiraka lehibe izy ireo afaka manana ny toeranao manokana ianao haka aina nefa tsy mila manakaiky olona hafa iza koa no mampihanjahanja ny fahamendrehana. Tsy toy ny moron-dranomasina feno olona izy ireo izay mifanakaiky ny olona rehetra ka tsy misy fomba ahafahanao hanana fotoana manokana na fialan-tsasatra satria hitanao izay rehetra resahina eo amin'ny varavarana manaraka.
Ho fanampin'izany, raha misy antony tsy ampy ny toerana ary maro ny olona, ​​ny olona dia mihevitra sy mamela (na tokony hamela) fa misy toerana malalaka eo anelanelan'ny olona iray sy ny iray hafa alohan'ny hitadiavana toerana ahafahan'izy ireo milentika. Mitanjaka tanteraka.
Rehefa avy namaky ireo fampahalalana rehetra ireo ianao dia manana angon-drakitra ampy izao hahafahanao manombana raha te-hitsangatsangana amin'ny morontsiraka Danoa ianao amin'ny fialantsasatrao. Na dia olona mankafy fitanjahana sy mankafy izany fahalalahana ara-pihetseham-po izany aza ianao, dia mety efa mieritreritra ny hijery sidina sy toeram-ponenana hahafahana mandeha haingana araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Danemark » Tora-pasika miboridana any Danemark